YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, March 20
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မတ်လ (၁၆) ရက်နဲ့ (၁၉)ရက် နေ့စွဲများနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/20/20120အကြံပြုခြင်း
မနန်းစိုး မနန်းစံ ရင်ချင်းဆက်အမွှာညီအမကို အောင်မြင်စွာခွဲစိပ်ကုသပေး ခဲ့ သော ဆရာဝန်ကြီးကွယ်လွန်
Dr. Pe Nyun has passed away at 10:00 p.m in Toronto, Canada.
၁၉၇၀ စုနှစ်များက မနန်းစိုး မနန်းစံ
ရင်ချင်းဆက်အမွှာညီအမကို အောင်မြင်စွာခွဲစိပ်ကုသပေး ခဲ့ သော ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေညွန့်(တိုရန်တိုမဟာဓမ္မိကကျောင်း၏ရာသက်ပန် ကဆုန်လပြည့်နေ့အလှူရှင်၊ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း၏နာယက ကျောင်းဒါယကာ၊ ရဟန်းဒါယကာဒေါက်တာဖေညွန့် သည် March 17, 2012 Saturday နေ့ တွင်တိုရန်တိုမြို့ ၌ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ အား ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Dr. Pe Nyun's funeral service which will be held at
Forest Lawn Mausoleum & Cremation Centre, as follow:
Date: March 21, 2012 Wednesday
Time: 02:00 P.M - 03:00 P.M
Location: Forest Lawn Mausoleum & Cremation Centre
ON M2N 5L6
‎အစိုးရဌာနများ မီဒီယာအပေါ် တရားစွဲဆိုခြင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားစီရင်ရေး၏ အခန်းကဏ္ဍသည် စောင့်ကြည့်ရမည့် အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာ
အစိုးရဌာနများ မီဒီယာအပေါ်တရားစွဲဆိုခြင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားစီရင်ရေး၏ အခန်းကဏ္ဍသည် စောင့်ကြည့်ရမည့် ကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်လာကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် သူများနှင့် ပညာရှင်အချို့ကပြောသည်။ ယခုတစ်လော ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာသည့် မီဒီယာ များနှင့်အစိုးရဌာနများ၏ တရားရေးရာ အကြောင်း အချက်များပေါ်အခြေခံ၍ ထိုကိစ္စရပ်များ အတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိနေသူသည် တရားရေးဖြစ်ခြင်း ကြောင့် ပေါ်ပြူလာ နယူးစ် ဂျာနယ်မှ ယင်းဖြစ်စဉ်များအတွက် တရားရေးရာနှင့် တရားရေးမဏ္ဍိုင်သည် စောင့် ကြည့်ရမည့် အကြောင်းအချက်အဖြစ်ထင်မြင်မိပါသလားဟု မေးမြန်းခဲ့သည်တွင် ယင်းတို့မှ တညီတညွတ် ထဲ အထက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ကာလတွင် လွှတ်တော်တွင်း၌ လည်းဥပဒေပြုခြင်းများ၊ပြဌာန်းခြင်းများ ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိခြင်း ကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးသည် နိုင်ငံတွင်း၌ အဓိကအရေးပါလာသည့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပြဌာန်းဖော် ဆောင် သည့် ဥပဒေများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအရှိလျှင် ဥပဒေသည် ဥပဒေအတိုင်းသာ ရှိနေ မည်ဖြစ် ကြောင်း၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားရေးမဏ္ဍိုင်သည်ဘက်လိုက်မှုရှိမည်၊ ဖိအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဆိုလျှင် ယနေ့ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းကာလတွင် မလိုလားအပ် အဖြစ်ပွားအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး အများကလည်းလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက ပြောသည်။ “ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလိုနိုင်ငံမှာလည်း အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေ စိုးမိုးသလား ဥပဒေအတိုင်း ဆုံဖြတ်နိုင်ရဲ့လား ဆိုတာကိုတော စောင့်ကြည့်ရမယ်။ နောက် တစ်ခုက တရားရေး မဏ္ဍိုင်ခိုင်မာဖို့ဆိုရင် တစ်ပါးထိုင်တရားရေးက သင့်တော်သေးရဲ့ လားဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ် စရာရှိလာပြီထင်တယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်ဒေသတွင်း အလိုအပ်ဆုံးကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားအားလုံးလည်း ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရန်လိုအပ်သလို လေ့လာမှတ်သားထားရန်လည်းလိုအပ်ကြောင်း တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်ကဆိုသည်။ “ အုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားနဲ့ တရားစွဲ အဖွဲ့ အစည်းတွေအားလုံးက ဥပဒေကိုလက်တစ်လုံးခြား မလုပ်ဖို့ လိုတယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။
လက်တစ်လောကာလအတွင်းမီဒီယာများအား အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများမှ တရားစွဲဆိုမှုပြုခြင်း တွင် အစိုး ရ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် မီဒီယာများအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းရာများကို လေ့လာ မှတ်သားထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးကပြောသည်။ “တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ တရားစွဲမယ်ဆိုတာမျိုး၊ တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ရေးမယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ ကလေးကလား ဆန်လွန်း တယ်ထင်တယ်။ ဆိုတော့ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကလည်း ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ကိုလေ့လာ ထားပြီး ဘယ်လိုအကြောင်းကိုရေးသားရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေ က လည်း ဘယ်လိုအကြောင်းမှ ပဲတရားစွဲဆိုလို့ ရနိုင်တယ်ဆို တာမျိုး လေ့လာထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ တစ်ခုခု ဆိုတာနဲ့ တရားစွဲမယ်၊ ဥပဒေကြောင်း အရ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့ မတော်ရင် ညောင်မြစ်တူးတာ ပုတ်သင်ဥပါပေါ် တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် မီဒီယာများနှင့် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများ၏ အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးသည် မှားယွင်းနိုင် သည်များရှိနိုင်ပြီး ယင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရင်ဆိုင်ရသည့် တရားရေး၊ တရားခွင်၏ ဖြောင့် မတ်မှန်ကန်စွာသုံးသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ်တည်နေခြင်းကြောင့် တရားရုံးကသာ သမာသမတ် ကျစွာ ဥပဒေနှင့်အညီဆုံးဖြတ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ် မဆို ပြည်သူအများ ကလေးစားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန် ကပြောသည်။ “ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဥပဒေအားနားလည်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူတွေ အများကြီးလိုတယ်။ နောက်ပြီး အစိုးရဌာနတွေ ၀န်ကြီးဌာနအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်လည်း ဥပဒေ ကို သေသေချာချာလေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်။ မီဒီယာတွေကလည်း ဥပဒေကို လေ့လာ ထားသင့်တယ်”ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျင့်သုံးဆဲ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေတွင် မီဒီယာများနှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သည့် အသေရေဖျက်မှု ပြစ်မှု ၄၉၉ ၊ပြစ်ဒဏ် ၅၀၀သည် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေအဖြစ်သာရှိနေခြင်းထက် တရားမမှု ဖြစ်ရေးဆွဲ ပြဌာန်းနိုင် လျှင်ပိုမိုကောင်း မွန်ကြောင်း မီဒီယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူအချို့ကပြောသည်။ သို့ရာတွင် ပြဌာန်းထား သည့်ဥပဒေတိုင်း၌ ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုသည့် အကြောင်းချက်မှာ ရှိနေသဖြင့် ယင်း ကင်းလွတ် ခွင့်ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ် တရားရေး၏ မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်မှုသည် အရေးပါကြောင်း တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်ကပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက“ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတရားစီရင်ရေးက တစ်ပါးထိုင် စီရင်ရေးဆိုတော့ တရားရေးမဏ္ဍိုင် မတိမ်းစောင်းအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါ့ မလားဆိုတာ က မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပြီ။ ”ဟု ဆိုသည်။ ယင်းအတွက် အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုများ၏ တရားခွင်မတက်မီ အမှုကြားနာသည့်အဆင့်တွင် တရားရုံး နှင့် တရားသူကြီး၏ မှန်မှန် ကန် ကန်ဆုံးဖြတ်မှုသည် စောင့်ကြည့်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်လာကြောင်း ရှေ့နေကိုသန်း ဇော်အောင်ကပြောသည်။ စတုထ္တမဏ္ဍိုင်၏ပင်မတာဝန်ဖြစ်သည့် မဏ္ဍိုင် သုံးရပ်အား စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ယင်းတို့၏ အကျင့် ပျက် ခြစားမှုများ၊ တာဝန်ပျက်ကွက်မှုများနှင့် ဥပဒေမဲ့ပြုမူမှုများကို ဖော်ထုတ်ရေး သားရန် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကို အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် တရားစွဲ ဆိုလျှင် ဒီမိုကရေစီနိင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏မှတ်ကျောက် ဖြစ်သောသတင်းစာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုအား ထိခိုက်စေသကဲ့သို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်း အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီ ခြေလှမ်းများကို အဟန့် အတားဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း၎င်းကပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အပါအ၀င် မည်သူမဆို အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းထိ ချမှတ်ခံရနိုင်
Tuesday, 20 March 2012 16:03
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အပါအ၀င် မည်သူမဆို အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်းအထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေအရ သိရသည်။
အများနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၃) တွင် မည်သူမဆို အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခိုးမှု၊ အလွဲသုံး စားပြုမှု၊ သို့တည်းမဟုတ် လိမ်လည်မှုတို့ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ၁၀ နှစ်ထက် မနည်းသည့် ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ထို့ပြင် ငွေဒဏ်ကိုလည်း ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ မည်သူမဆိုဟူသော စာသားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း ထားသောကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အနေဖြင့်လည်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးစားပြုပါက အခြားသူများနည်းတူ ပြစ်ဒဏ်ကျခံ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေပညာရှင်များက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
တပ်မတော်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦး၊ တည်ဆဲ တရားဥပဒေ တစ်ခုခုအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘုတ်အဖွဲ့၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဘဏ်၊ အခြားအဖွဲ့ တစ်ခုခု၊ သမ၀ါယမအသင်း တစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ကြေညာသော အသင်းများ၊ စသည်တို့က ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့တည်းမဟုတ် အသုံးပြုရန် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထား သည့်၊ သိမ်းဆည်း ထားသည့်ငွေ၊ သိုလှောင်ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင် ၊ အခြားပစ္စည်း တစ်ရပ်ရပ်တို့သည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် မှတ်ပုံတင်အက် ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အသင်းတစ်ခုခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပုဒ်မ (၂၆) အရ ကုမ္ပဏီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထား သော အသင်းတစ်ခုခု၊ ပြည်သူတို့ ဆိုင်ရာ ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအဖွဲ့တစ်ခုခု၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု စသည် တို့ကပိုင်ဆိုင်သည့် သို့တည်းမဟုတ် အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထား သည့်၊ သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေ၊ သိုလှောင်ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင် ၊ အခြားပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်တို့သည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်း များဖြစ်ကြောင်းအများနှင့်သက်ဆိုင် သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၂) သိရသည်။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေ အမှတ် (၁) ဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ် ပြီး ယင်းဥပဒေသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေနှင့် အလား တူသော်လည်း သီးခြားဥပဒေဖြစ် ကြောင်း အထက်တန်းရှေ့နေတစ် ဦးကဆိုပါသည်။
ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း၏အဓိပ္ပါယ် ကို ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၂) တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပြီး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုပုဒ်မ (၂) တွင် ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
အဓိပ္ပါယ် ရှင်းလင်းချက်တွင် ပါရှိသော စကားရပ်များကို လေ့လာပါက ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဟူသော စကားရပ်နှင့် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းဟူသော စကားရပ်သည် ကွာခြားကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆(၁) အရ ပေးနိုင်သောပြစ်ဒဏ်မှာ ၇ နှစ်အထိထောင်ဒဏ်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ အရဆိုပါက ပေးနိုင်သောပြစ်ဒဏ် မှာ တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ၁၀ နှစ်ထက်မနည်းသည့်ထောင် ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ထို့ပြင်ငွေဒဏ်လည်း ပါဝင်သောကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ပိုများ သည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အများ နှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခိုးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှု ကျူးလွန် သောသူများကို ထိရောက်စွာအပြစ် ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေနှင့် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ တို့၏ ခြားနားချက်များမှာ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေက ခိုးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေက တရားမ၀င်ဘဲ လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊ ခိုးမှု ၊ အလွဲသုံးစားမှု သို့မဟုတ် အကျိုးဖျက်ဆီးမှုကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရသိရသည်။
အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ပြည်ထဲ ရေး၏ အခွင့်အမိန့်မရှိဘဲ မည်သည့် တရားရုံးကမှ စစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်းသိရသည်။
အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေအရ အရေးယူခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ် အများအပြားရှိခဲ့ကြောင်းလည်း တရားစီရင်ထုံးများအရ သိရပါသည်။
ကျောက်ဖြူ ပိုက်လိုင်းလျော်ကြေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလွဲသုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ပျားတဲကျေးရွာတွင် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းသွားသော လယ်မြေအတွက်ရရှိသည့်လျော်ကြေးအား ကြတ်တိန်ကျေးရွာအုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်စိန်ချမ်းက ငွေ ၁၉၉၈၀၀၀ (ဆယ့်ကိုးသိန်းကိုးသောင်းရှစ်ထောင်) ကျပ်ကို အတင်း အဓမ္မထုတ်ယူသွားကြောင်း လယ်မြေပိုင်ရှင် ဒေါ်စံဂိုးမက ပြောကြားပါသည်။
လယ်ယာမြေကွင်းအမှတ် (၄၇၄/၁) ၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဒေါ်စံဂိုးမ၏ အမျိုးသား ဦးမောင်ကျန်ချီးဖြစ်ပြီး ၄င်းမှာ လေဖြတ်ရောဂါခံစားနေရပါသဖြင့် မည်သည့် အလုပ်အကိုင်မျှ မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ ထိုမြေအားလျာ်ကြေးပေးရာတွင် ဦးမောင်ကျန်ချီးအမည်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ လုံးဝဆက်စပ်ပတ်သက်မှုမရှိသော ဦးအောင်စိန်ချမ်း (ဘ) ဦးအောင်ထွန်းဦး အမည်ဖြင့်သာ အမည်ပေါက်လာကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
၄င်းထုတ်ယူသွားသောလျော်ကြေးငွေမှ ပမာဏအချို့ကို ပေးရန် တောင်းဆိုရာတွင် ကြတ်တိန် ကျေးရွာအုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်စိန်ချမ်းက ငွေလုံးဝမပေးဘဲ ‘ငွေလိုချင်ရင် တိုင်ချင်သည့်နေရာတွင်သွားတိုင်’ ဟု ရိုင်းပြစွာပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေါ်စံဂိုးမကပြောကြားခဲ့သည်။
ဥပဒေကြမ်းများ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု သော်လည်း ပြည့်စုံမှုမရှိ
by Yangon Press International on Tuesday, March 20, 2012 at 8:35am ·
မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် (YPI)
ယမန်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့် မြေလွတ် မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေကြမ်းများသည် ပြည့်စုံမှု မရှိသေးသော ဥပဒေကြမ်းများဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့နှင့် ပညာရှင်များကပြောသည်။
မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ယခုဥပဒေကြမ်းများသည် ပြည့်စုံမှုမရှိသေးကြောင်း သို့သော် လက်ရှိအနေအထားတွင် တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကြောင်းပြောသည်။
၎င်းက ယခုကဲ့သို့ အကူးအပြောင်းကာလတွင် ပြည့်စုံသော ဥပဒေရေးဆွဲရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း နောင်တွင် ပြည်သူ့အင်အားကို ရရှိလာပါက ပြည့်စုံသောဥပဒေများကို ရေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
၎င်းက “ အခုအချိန်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆွေးနွေးလို့မရသေးပါဘူး။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ လွှတ်တော်ထဲ ပိုရောက်လာရင် ပြည့်စုံတဲ့ ဥပဒေတွေဆွဲလာနိုင်မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဝင်းမျိုးသူက ယခု အတည်ပြုလိုက်သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ “ အချို့ဥပဒေတွေက ရှိတာထက်စာရင် မရှိတာပိုကောင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် အခြားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအုန်းကလည်း မူလက ဆွေးနွေးခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်းတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်များကို ၎င်းအနေဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ထိုအချက်များ ဖြည့်စွက်မှုရှိမရှိကို ယခုဥပဒေ ပေါ်ထွက်လာပါက စောင့်ကြည့် လေ့လာရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
‘ ဥပဒေကြမ်းကိုမလေ့လာရသေးတဲ့အတွက် သေချာမပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အရင်ဥပဒေကြမ်းကို ထပ်မဖြည့်ထားဘဲ အတည်ပြုတာဆိုရင် အဲဒါ အလှပြ ဥပဒေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးကြည်မြင့်ကမူ ယခုဥပဒေများသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ရေးဆွဲထားသေား ဥပဒေများဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
မကြာမီကျင်းပရန် ရှိသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်ဟု မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး မိန့်ခွန်းများတွင် ပြောကြားထားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သော ဥပဒေကြမ်းများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၅ အရ သမ္မတအနေဖြင့် ၁၄ ရက်အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဥပဒေအဖြစ် ပြဌာန်းခြင်း သို့မဟုတ် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ။
မီဒီယာဥပဒေ ပုံနှိပ်မီဒီယာထက် ကျယ်ပြန့်ရန် လိုလားနေကြ
by Yangon Press International on Tuesday, March 20, 2012 at 10:17am ·
အစိုးရ၏ မီဒီယာဥပဒေကြမ်းသည် ပုံနှိပ်မီဒီယာကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ပ မီဒီယာများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် ဥပဒေအရ အကျုံးဝင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ပြည်ပမီဒီယာတာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
လက်ရှိရေးဆွဲနေသည့် မီဒီယာဥပဒေတွင် အင်တာနက်၊ ရုပ်သံ၊ ရေဒီယို အစရှိသည့် မီဒီယာများ အကျုံး မ၀င်သဖြင့် ယင်းကဏ္ဍများအတွက်လည်း ဥပဒေအရလွှမ်းခြုံမှုရှိသင့်ကြောင်း ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံက လက်ထောက်ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်အယ်ဒီတာချုပ် ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
မြန်မာ မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ဖရင့် ကိုမတ်လ ၁၉ ရက်နှင့် ၂၀ ရက် ၂ ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့ရာတွင် မီဒီယာ ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန ၀န်ကြီးနှင့် ညွှန်ချုပ်တို့က ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ (ဓါတ်ပုံ -သူရမျိး)
လက်ရှိအချိန်တွင် ဧရာဝတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ၊ မဇ္ဈိမ အစရှိသည့် ပြည်ပအခြေစိုက်မီဒီယာများသည် ပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက်သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းဌာနက အယ်ဒီတာချုပ် ဦးခွန်စိုင်းကလည်း ဧရာဝတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (DVB) နှင့် တိုင်းရင်းသား သတင်းဌာနအများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် (BNI) သတင်းဌာနတို့အနေဖြင့် အင်တာနက်၊ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်သံမီဒီယာများက အဓိကထုတ်လွှင့်နေရသဖြင့် ယခုရေးဆွဲနေသည့် မီဒီယာဥပဒေတွင် အကျုံးမ၀င်ဖြစ်နေသည်ဟု ပြောသည်။
“အဓိကတော့ မီဒီယာလို့ပြောရင်အကုန်လုံးကို ခြုံစေချင်တယ်။ တစ်ခုလောက် ပဲကွက်ပြီး လုပ်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။”ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
Burma News International (BNI)အား တိုင်းရင်းသားမီဒီယာများပအပါအ၀င် သတင်းမီဒီယာ (၁၁) ဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ နှင့် BNI တို့ပူးပေါင်းကာ ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က မီဒီယာဥပဒေနှင့် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်ငါးချက်ပါ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြည်ပမီဒီယာသးများအနေဖြင့်လည်း ပြည်တွင်းမီဒီယာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် မီဒီယာကြီးမျာအနေဖြင့်လည်း တိုင်းရင်းသားမီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ကူညီပံပိုးလုပ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ထို့ပြင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေမည့် အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေအပါအ၀င် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေမည့် ဥပဒေများအား ဖျက်သိမ်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
“အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေဖျက်ဖို့ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမီဒီယာဆိုတာက စလုပ်ကတည်းက အခုအထိ အင်တာနက် ရေဒီယို၊ ရုပ်သံတွေကို ပဲ အားကိုပြီး လုပ်လာတာလေ။ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေတာပေါ့”ဟု ဦးခွန်စိုင်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ညီလာခံကို ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (UNESCO)၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ (IMS) တို့က ဦးစီးကျင်းပလျှက်ရှိပြီး မီဒီယာလောကမှ တာဝန်ရှိသူများမှ တက်ရောက်ကြသည်။ ။
နိုင်ငံရေးနှင့်မပတ်သက်ရ ဆိုသည်ကို ရုပ်ရှင် လောကသားများ ကန့်ကွက်
by Yangon Press International on Tuesday, March 20, 2012 at 9:07am ·
အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ အမှုဆောင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်ဖူးခြင်း မရှိသူဖြစ်ရမည်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ ပြောကြားကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိရာ ယင်းအချက်ကို ရုပ်ရှင်လောကသားများက ကန့်ကွက်ပြောဆိုနေကြသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ယခုကဲ့သို့ စည်းကမ်းချက်ချမှတ်ခြင်းသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ထိုသိုပိတ်ပင်ခဲ့လျှင် ယင်းအချက်သည် လူ့အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းက “ တကယ်လို့ ဒီသတင်းတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ကျွန်တော် တရားစွဲမယ် ” ဟု YPI သို့ပြောသည်။
၀ါရင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်းကလည်း ယခုကဲ့သို့ စည်းကမ်းချမှတ်ခြင်းသည် မလိုအပ်သော စည်းကမ်းချမှတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေလည်း မရှိကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ၎င်းအနေဖြင့် သဘောမတူနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးခိုင်မောင်ရည်ကမူ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ သွားနေသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားနေသူများအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်း ဝေဘန်ပြောဆိုသည်။
၎င်းကထပ်မံပြီး ယခုကျင့်သုံးနေသောစနစ်သည် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်သဖြင့် မည်သူမဆို၊ မည်သည့်ပါတီကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ ၀င်ရောက်ခွင့် ရှိသင့်သည်ဟုလည်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ အခုအခြေအနေမှာ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကန့်သတ်ထားလို့မရဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမဆို နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သတ်ရဘူးလို့ပြောလာရင် အဲဒီသူက ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သူပဲ ” ၎င်းကပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၄ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများကို မဆန့်ကျင်လျှင် အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစည်းအရုံးများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို လာမည့် ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးဝင်များက မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အရပ်သား အစိုးရတက်လာပြီးနောက် တနှစ်တာ ကာလအတွင်း ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများ၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းမှုများ၊ စနစ်နှင့် မညီလျှော်သည်များကို ပယ်ဖျက်မှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခွင့် ဥပဒေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်ဥပဒေတို့ ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ။
Danny (Daniel) Lwin
Uploaded by toemoelwin on 19 Feb 2012
Live performance with JAM Live Band on February 18, 2012 at 20th Anniversary Celebration of Burma Canadian Association of Ontario & YouthDream Scholarship Award Ceremony, Toronto, Ontario, Canada.
အာစီယံရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ကို hotel မှာဝင်ဖမ်း
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့လာတဲ့နိုင်ငံခြားက ANFREL အဖွဲ့ကိုပုဇွန်တောင် Orchid
အစည်းအဝေးလုပ်နေတုန်း၊စရဖနဲ့ရဲတွေကOrchid hotel ကိုဝိုင်းထားပြီးဝင်ဖမ်းတာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်မှုရှိဖို့ သင်တန်းပေးသူ ပြည်နှင်ခံရ
မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၂ (YPI)
Asia Network for Free Election အမည်ရှိသည့် ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့မှ ညွန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူအား မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်နှင်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းအဖွဲ့အနေဖြင့် လာမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှုကို စောင့်ကြည့်ရမည့် အချက်အလက်များ ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေး ဟောပြောခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ အလည်အပတ် ဗီဇာဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံသို့လည်း ခွင့်တောင်းသည့် စာတင်ပြထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နေချိန်၊ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာများအား ဖိတ်ခေါ်၍ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ဖရင့်ကျင်းပနေချိန်တွင် ယခုလို ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပေးမှု၊ စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်သည့် ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတခု၏ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူအား ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မတ်လ (၁၆) ရက်နဲ့ (၁...
မနန်းစိုး မနန်းစံ ရင်ချင်းဆက်အမွှာညီအမကို အောင်မြင်...
‎အစိုးရဌာနများ မီဒီယာအပေါ် တရားစွဲဆိုခြင်းကိစ္စရပ်မျ...
ကျောက်ဖြူ ပိုက်လိုင်းလျော်ကြေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလွ...
ဥပဒေကြမ်းများ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု သော်လည်း ပြည့်စုံ...
နိုင်ငံရေးနှင့်မပတ်သက်ရ ဆိုသည်ကို ရုပ်ရှင် လောကသား...
အာစီယံရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ကို h...